Nhau - Kuita kwakanaka mushure megore idzva
Musi waMarch 2, VaRobert, mutengi weAustralia, vakauya kukambani yedu zvakare. Ino inguva yake yechitatu kuuya kuChina uye tuoou. Mushure mekutanga kwekutanga nzwisiso, yechipiri kuongororwa kwese uye kubudirira kwekupedzisira panguva ino VaRobert vagara vachisimbisa kuti vanoda zvimwe zvigadzirwa zvepamusoro-soro, zvehunhu uye zvakatipoteredza, uye havana kuwana zvigadzirwa zvavanonyatsoda mukati. Shijiazhuang. Nekudaro, aigara achirumbidza kunaka uye kutaridzika kwezvigadzirwa zvedu, izvo zvinogona kunzi zviri pamberi pemamwe makambani muindasitiri yemuno. Kunyanya, maTransformer uye simulation modhi dzimba dzakaiswa pagedhi fekitori dzave chiratidzo chemashambadziro chigadzirwa kukwezva vatengi.
Munguva yerwendo urwu, VaRobert vakasainira maodha emamisha matatu eEuropean. Mushure memwedzi mina yekushanya kwekutevera, dhipatimendi rekunze kwenyika richangobva kuvhura Alibaba chikuva. Nekuda kwekukwira nekudzika uye makwikwi anotyisa emusika, akanganiswa nezvinhu zvakawanda zvisina chokwadi, pamwe nekuyedza kwemadhipatimendi ese ekambani, ichiri kuwana mibairo yakanaka yekutengesa. Kutarisana nebasa rinotevera, VaRobert vakaita budiriro huru mukutengesa, Mikana nematambudziko zvinogara pamwe chete. Tine chivimbo chekuwana mhedzisiro iri nani.
Kupokana pakati pezvinodiwa nevanhu zvehunhu hwehupenyu nenzvimbo yepakati zvakanyanyisa, uye mwenje simbi villa, seyenzvimbo yezvikamu zviviri, kudiwa kwayo kwakazara kuri kuwedzera gore rimwe nerimwe, izvo zvakakosha mukuchengetedza nzvimbo uye kugadzirisa magariro.
Tuoou anga achigadzirira kugadzirwa kwezvigadzirwa zvitsva, achivavarira hunyanzvi uye kusimudzira kwakasiyana kwechiedza simbi villa. Icharamba ichisimbisa kuvakwa kwepuratifomu, kudzamisa dhizaini dhizaini, kupa nyanzvi dhizaini dhizaini uye kugadzirisa iyo mushure-yekutengesa sevhisi system. Ini ndinotenda kuti mwenje simbi villa chirongwa ichaunza nyowani yekubvisa